लाखौं युवाहरुका लागि खुसीको खबर : देशैभरबाट ११३४६ दरबन्दी माग, कुन प्रदेशबाट कति ? « Janaboli
लाखौं युवाहरुका लागि खुसीको खबर : देशैभरबाट ११३४६ दरबन्दी माग, कुन प्रदेशबाट कति ?
काठमाडौ । लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहेका लाखौं युवाहरुका लागि खुसीको खबर छ । कर्मचारी समायोजनको बहानामा पटक पटक सारिदै आएको लोकसेवाको विज्ञापन अब भने खुल्ने पक्का भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका स्थानीय तहबाट रिक्त कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरी आज वा भोलीमै लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले गत ८ वैशाखमा देशैभरका ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त विवरण पठाउन भनेको थियो ।
२० वैशाखसम्म्को समयसीमा दिइएकोमा दैशभरका चार सय ३४ स्थानीय तहले ११ हजार ३ सय ४६ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाएका छन् ।बाँकी तहलाई समेत पुन पत्राचार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
देशैभरका स्थानीय तहबाट मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी रिक्त पदको विवरण प्रदेश एकले पठाएको छ । सो प्रदेशका स्थानीय तहबाट २ हजार ३ सय ४९ दरबन्दी माग भएको छ । यस्तै सात नम्बर प्रदेशले १ हजार ३ सय ८४ रिक्त पदको विवरण मन्त्रालयमा पठाएको छ । यस्तै प्रदेश दुईले १ हजार ७ सय ३२, प्रदेश तीनले १ हजार ५ सय ८१ माग गरेका छन् ।
त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचले १ हजार ८ सय ७२ जना, प्रदेश नम्बर ६ ले ८ सय २८ र प्रदेश नम्बर सातले १ हजार ३ सय ८४ जनाको रिक्त दरबन्दी पठाएका छन् । स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण मङ्गलवार नै अद्यावधिक भइसकेको भए पनि प्रक्रियागत विषयहरू मिलाउन लोक सेवा आयोगसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बीच मन्त्रालयमा छलफल भएको जारी छ । थप छलफल पछि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने स्रोतले जनाएको छ ।
लकडाउनका कारण रोकिएको परीक्षा लोकसेवाले लिने, यस्ता छन् सर्त [सुचनासहित]
काठामडौं । कोरोना महामारीपछि सुरु भएको लकडाउनका कारण रोकिएको परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ ।
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले परीक्षार्थीहरुका लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण जानकारी प्रकाशित गरेको छ । कोरोना संक्रमण
रोकिएका आठ हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना के हुन्छ ? विज्ञापन खुल्छ की खुल्दैन ?
काठमाडौं । सरकारी निकायमा नयाँ भर्ना स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयले करिब आठ हजार नयाँ कर्मचारीको
लोकसेवाको नयाँ पदपूर्ति बारे यस्तो निर्णय
काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा नयाँ निजामति कर्मचारी भर्ना बारे